Abakhiqizi Be-Stud | I-China Stud Suppliers, Ifektri
Isitudi esinamandla amakhulu sisetshenziselwa ukulungisa nokuxhumanisa umsebenzi womshini wokuxhuma. Zombili iziphetho zesitudi zinemicu, kanti isikulufa esiphakathi sinemicu eminyene futhi emincane. Ibizwa ngenduku eqondile / induku yokuncipha, ebizwa nangokuthi isikulufa esinamakhanda amabili. Ngokuvamile kusetshenziswa imishini yezimayini, amabhuloho, izimoto, izithuthuthu, izakhiwo zensimbi yokubilisa, ama-pylon, izakhiwo zensimbi ezinde kanye nezakhiwo ezinkulu.
Hot-cwilisa stud lashukumisa isetshenziselwa ukulungisa nokuxhumanisa umsebenzi wokuxhuma imishini. Zombili iziphetho zesitudi zinemicu, kanti isikulufa esiphakathi sinemicu eminyene futhi emincane. Ibizwa ngenduku eqondile / inciphisa induku, ebizwa nangokuthi isikulufa esinamakhanda amabili. Ngokuvamile kusetshenziswa imishini yezimayini, amabhuloho, izimoto, izithuthuthu, izakhiwo zensimbi yokubilisa, ama-pylon, izakhiwo zensimbi ezinde kanye nezakhiwo ezinkulu. Ngemuva kokushiswa kwendawo yokushisa okushisayo, umphumela we-antirust uyatholakala.